Mpamatsy Oxygène Generator sy Factory | Mpanamboatra mpamokatra oxygen oxygen
Vahaolana mifantoka amin'ny oxygen oxygen an'ny AngelBiss amin'ny Industrial Application
1. Fampiharana ny concentrator oxygen oxygen an'ny AngelBiss amin'ny mpamokatra ozon
AngelBiss concentrator oxygen dia afaka manova ny oxygen ho lasa ozone amin'ny alàlan'ny famatsiana oksizenina ho an'ny ozone generator. Ny Ozone dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanamorana, fanesorana fofona, fitehirizana sakafo ary fanadiovana rano.
Ny ekipa teknikan'ny AngelBiss dia hamorona mpamorona ozone ho an'ny fanamorana sy famonoana otrikaretina atsy ho atsy.
Mpandrindra oksizenina 5L azo havaozina miaraka amin'ny fahadiovana 93% (AC, DC, bateria)
ANGELBISS, Ilay voalohany namorona ny bateria voalohany izay miasa ao amin'ny 5LPM Oxygen Concentrator. Na dia mamokatra O% fahadiovana O2 amin'ny 5L / min mikoriana.
ANGEL5SB andian-dahatsoratra dia iray amin'ireo mpiorina oxygen 5L azo entina miaraka amin'ny rafitra fanairana feno indrindra, famantarana ny lesoka marina ary ny fampandehanana fiarovana azo antoka indrindra eny an-tsena. Nandalo ny fanamarinana CE sy ISO13485.
1.Dia bateria Lithium azo antoka DC 24V
2. Fampiharana haingana ao anatin'ny 120 minitra, fihazakazahana mitohy 120 minitra (2 ora)
3.5Liter miaraka amina output madiodio oksizena 93% ± 3% ho an'ireo mpampiasa COPD
4. Ny fahadiovan'ny oxygen amin'ny isa (Fahamarinana 00.0%)
5.Timer & Touch bokotra miasa
6.Large 6 'LED Light Asehoy ny angon-drakitra miasa rehetra
7.Niorina ora feno
8.Fampiasana maharitra ho an'ny faritra manodidina ny mari-pana (45ºC), haavo avo (15000feet).
Seho manokana natolotry ny AngelBiss Technology
1.Ny bateria voalohany manerantany dia niasa 5LPM @ 93% Oxygen Concentrator.
2.Ny hamandoana mavesatra azy dia manala sivana molekiola
3. rafitra miankina amin'ny Oxygen miankina & nebulizer
4.Zava-baravarana mihidy zaza
Fampiharana sy topy maso ny vokatra oxygen oxygen Angelbiss oxygenconcentrator Angeibiss dia afaka manome vahaolana samihafa arakaraka ny filan'ny mpanjifa.
Ny mpamokatra herinaratra kely dia afaka mamaly ny filan'ny oksizenan'ny fianakaviana, olona tsirairay sy toeram-pitsaboana kely.
Ho an'ireo andrim-pitsaboana lehibe sy ozinina lehibe dia manome rafitra rafitra famatsiana oksizenina feno izahay, izay natao, namboarina ary napetraka eo an-toerana arakaraka ny haben'ny fampiharana.
Ny mpamokatra ôksizenina Angelbiss dia azo ampiasaina amin'ny sehatry ny indostria, ao anatin'izany ny mpamokatra ozone, ny famokarana vera, ny fiompiana anaty rano, ny fitsaboana ny rano maloto, ny fanamorana indostrialy, ny fisarahana azota ary ny oksizena, sns.
Angelbiss dia afaka manome oxygen oksizenina mifantoka be sy azo antoka ho an'ireo tranga voalaza etsy ambony.
Raha manana fanontaniana momba anay ianao dia afaka mifandray aminay amin'ny info@angelbisscare.com, ary ny mpiasan'ny serivisinay dia hifandray aminao faran'izay haingana.
Ny vahaolana mpitrandraka ôksizenina AngelBiss amin'ny fampiharana anaty rano. Io no loharano azo antoka sy azo antoka indrindra azo ampiasaina amin'ny fiompiana anaty rano ary afaka manolo izay loharano famatsiana oksizena hafa. Ampy ny atin'ny ôksizena ao anaty rano, izay mahasoa ny fitomboan'ny trondro sy mampihena ny isan'ny bakteria, amin'izany dia manatsara ny famokarana trondro ary manatsara ny fahasalaman'ny trondro. Zava-dehibe ny oksizena avo lenta amin'ny famokarana fiompiana trondro sy trondro.
Ozone Generator Oksizena
Vahaolana mpamokatra oxygène AngelBiss amin'ny mpamokatra ozon. AngelBiss concentrator oxygen dia afaka manova ny oxygen ho lasa ozone amin'ny alàlan'ny famatsiana oksizenina ho an'ny ozone generator. Ny Ozone dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanamorana, fanesorana fofona, fitehirizana sakafo ary fanadiovana rano.